Jay Z Anobvisa Blueprint Trilogy kubva kuApple Music uye iTunes | Ndinobva mac
Zvinotaridza kuti zvishoma nezvishoma ivo vatangi vakuru veTidal vane mashoma zvigunwe zvehuma, Ivo vari kutanga kubvisa maalbham avo kubva akasiyana akasiyana emimhanzi mapuratifomu. Kana wekutanga aive Kanye West, achingoburitsa dambarefu rake idzva paTidal, parizvino ndiJay Z, mumwe wevatangi veTidal, uyo achangobva kubvisa Blueprint trilogy kubva kumasevhisi ese ekushambadzira masevhisi seApple Music, Spotify, Amazon , Rhapsody, iTunes… asi kwete kubva kuPandora. Pane kufarira here? Mavhiki mashoma apfuura runyerekupe rwakatanga kutenderera nezve inogona kutengwa yaTidal neSamsung, makuhwa akazopedzisira arambwa. Asi ndizvo hazvireve kuti Tidal haisati iri kutengeswa uye kuti Pandora anogona kuiwana.
Haisi nguva yekutanga kana kuzove kekupedzisira muimbi anobvisa zvese kana chikamu chemukati kubva mumumhanzi wekushambadzira sevhisi. Akazviita zvisati zvaitika nemapfumbamwe makumi mapfumbamwe album. Zvino iyo 99 album yakatevera uye ikozvino Blueprint trilogy yatevera. Jay Z, saKanye West haana kumbobvira ave nemazwi akanaka emimhanzi yekushambadzira masevhisi, pachokwadi Jay Z akanyora rap, iyo kana isinganzwisisike muChirungu, ini handinetse kuidudzira muchiSpanish (zviri nyore nzwisisa):
Iwe wakatenga mapfumbamwe maPhones, uye Steve Jobs akapfuma. [Nike] Phil Knight akakosha matiririyoni, iwe uchiri kutenga iwo kukika. Spotify iri $ 9 mamirioni, ivo havataure s ** t
Zviri kuziva kuti Mudzimai waJay Z Beyonce ane hukama hwakakura naApple. Makore matatu apfuura akaburitsa chete rake rekupedzisira dambarefu, raakakwanisa kutengesa angangoita miriyoni imwe mumazuva matatu ekutanga. Uyezve, Beyonce aive mumwe wekutanga kuratidza iyo Apple Watch Edition mumazuva anotungamira kutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Jay Z Anobvisa Blueprint Trilogy kubva kuApple Music uye iTunes
Izvi ndizvo zvichaunzwa naApple kwatiri Muvhuro unotevera